ဆန်စက်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်လယ်သမားများနှင့်စပါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံသို့မဟုတ်ဆန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဆန်စပါးဖျက်စက်သည်ကျောက်ကိုခွဲခြားနိုင်သည် ,ဆန်ကောက်ရိုး ,ခွင့်ပြုချက်နှင့်သီးနှံသီးနှံများမှအခြားအညစ်အကြေးများ , ဂျုံ,ကျောက်သားအချိုးအစားအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကျောက်ထုတ်စက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူမှုတ်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်သည်။ VQS စီးရီးဆန်ဖျက်စက်သည်ကျောက်ကိုရှင်းလင်းမည်။, သဲ, စပါးဆန်သို့မဟုတ်စပါးကုန်ကြမ်းများမှထွက်သောသတ္တုလုပ်ကွက်များနှင့်အခြားအညစ်အကြေးများ။ ဤဆန်စက်စက်၏အရှိန်နှုန်းသည်ပိုမိုများပြားသည် 98% နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်.
VSQ စီးရီးဆန်သန့်ရှင်းရေးစက်တွင်နို့တိုက်ကျွေးသောပလပ်စတစ်ပါရှိသည်, ကြီးမားသောကျောက်ထွက်ပေါက်, အညစ်အကြေးထွက်ပေါက်, သန့်ရှင်းတဲ့ဆန်ထွက်ပေါက်, သေးငယ်တဲ့ကျောက်ထွက်ပေါက်, မှုတ်ပန်ကာ ,လျှပ်စစ်မော်တာနှင့်စက်ဘောင်.
ကြိတ်ဆုံသောဘောဇဉ်သည်ကျောက်တုံးအချို့ကိုရောနှောလိမ့်မည်,သဲ, သေးငယ်တဲ့ကျောက်စရစ်ခဲ, စက်ရုံနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားစွန့်ပစ်, အမျိုးအနွယ်ကိုအမှုပေါင်း, စသည်ဖြင့်အညစ်အကြေးများသည်ကောက်ပဲသီးနှံများ၏အရည်အသွေးကိုလျော့ကျစေပြီးသိုလှောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းပိုးမွှားများဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ winnowing ဟုခေါ်သည်အရိုးရှင်းဆုံးသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း ,လယ်သမားကကောက်ပဲသီးနှံများကိုလေထဲသို့ပစ် ချ၍ အပေါ့ပါးဆုံးအညစ်အကြေးများကိုလေမှလွှတ်ထုတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်စိုက်ပျိုးရေးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာရှိနေသော်လည်း,ဒါပေမယ့်ဒီသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းဟာလေးလံသောအညစ်အကြေးများဖယ်ရှားပစ်လို့မရပါဘူး,ထိုကဲ့သို့သောကျောက်ကဲ့သို့,ကျောက်စရစ်ခဲ,etc.After စစ်ဆင်ရေးသန့်ရှင်းရေး, သိုလှောင်မှုမတိုင်မီလယ်သမားသည်ထုတ်ကုန်များကိုအရည်အသွေးအရအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး .Clean ဆန်နှင့်ဆန်စပါးသည်လယ်သမားအတွက်အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိနိုင်သည်.
စပါးကြိတ်စက်စက်အလုပ်လုပ်သောအခါ,အသုံးပြုသူသည်ဆန်ကိုအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်စပါးကျွေးသည် မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်၏တုန်ခါမှုစနစ်သည်အပေါ်ဆုံးထွက်ပေါက်အားထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ကျောက်တုံးငယ်များကိုဒုတိယမျက်နှာပြင်သို့ပြုတ်ကျပြီးဒုတိယထွက်ပေါက်မှထုတ်ပေးသည်။. ထို့နောက်မှုတ်တံငယ်သည်အလင်းနှင့်အညစ်အကြေးများမှုတ်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောစပါးများသည်တုန်ခါမှုမှထွက်သွားသည်.
1.စွမ်းရည်မြင့်ဆန်စက်ဖျက်ဆီးစက်။ စွမ်းရည်သည် ၁၀၀၀ မှ ၁၂၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်တစ်နာရီ ၁၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည် .
2.မြင့်မားသောသန့်ရှင်းရေးနှုန်းသည်. သန့်ရှင်းမှုနှုန်းထက်ပိုပါတယ် 98% နှင့်မည်သည့်အညစ်အကြေးမပါဘဲသန့်စင်.
3.ဆန်ကျောက်ဖယ်ရှားစက်သည်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်, စပါးကိုစပါးအစာကျွေးဖို့လိုတယ် ,မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ,အသုံးပြုသူသည်ကျောက်မှထသန့်သန့်ရှင်းနိုင်သည်, နှင့်အခြားအညစ်အကြေး .
4.အသေးစားစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ,VSQ100 ပါဝါမှာ 0.55kw ဖြစ်ပြီး VSQ150 ပါဝါပါ 1.5 kw.
5.ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးခြင်း။ စပါးကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြန့်နှံ့နေသည် ,ထို့နောက်ကျောက်တုံးနှင့်လေးလံသောတိကျသောအလေးများ၏အခြားပစ္စည်းများကိုအပန်းဖြေစခန်းမှဖယ်ရှားပစ်သည်.
6.ကျနော်တို့ကဒီဆန် destoner ဖျက်စက်နှင့်အတူကိုက်ညီ, စပါးကိုခွဲခြာစက် ,ဆန်စက်စက်တစ်လုံးတည်ဆောက်ရန်ဆန်စက်နှင့်ဆန်အဆင့်အတန်းစက် .